समारोहहरू - उनीहरूका लागि तयारी | मानगोबाट पोशाक र जम्पसुटहरू बेजिया
उत्सवहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ? आम पोशाक र जम्पसुट्स पनि
सुसाना Godoy | | विशेष अवसरहरू
को उत्सवहरु तिनीहरू पहिले नै पुन: प्राप्ति भइरहेको छ, केवल केही अंशमा। तर हामीलाई थाहा छ कि थोरै मात्र हामी सबै योजना कसरी योजना बनाउनेछ फर्काउने बारे सावधानीका साथ, यद्यपि यसको सावधानीहरूको साथ। तसर्थ, यदि ग्रीष्म theतु समारोहको अन्त्य अझै जारी नै छ भने, यो राम्रो समय हो तपाईको बाहिरी रूखलाई रमाउनलाई रमाईलो गर्न, यदि यो मानगोले तैयार गरेको हो भने।
लुगा र केहि जम्पसुट त्यसले तपाईंलाई भव्यता दिनेछ कि तपाईंले ती पार्टीहरू वा विवाहहरूको आनन्द लिन सक्षम हुनु आवश्यक छ जुन अझसम्म पहिले कहिल्यै आइसकेको छैन। यति धेरै कि हामीले छनौट गरेका छौ, सबै मोडेलहरू मध्ये केही, जुन उत्तम संयोजन गर्दछ र धेरै खुसीको कटौतीको साथ। के तपाई यो जान्न चाहानुहुन्छ के हो?
1 उत्सवहरूको लागि बैजनी रated्गको मिडी पोशाक
2 आमको मनपर्नेहरू बीच कोरल रातो
3 छोटो र साटन पोशाक सबै भन्दा राम्रो पाहुना हुन
4 लामो छापिएको पोशाक
5 गुलाबी रंगमा समारोहको लागि जम्पसुट
उत्सवहरूको लागि बैजनी रated्गको मिडी पोशाक
को मिडी लुगा जब हामी उत्सवहरू सोच्दछौं तिनीहरू सँधै उत्तम विकल्प हुन्छन्। विशेष गरी जब तिनीहरू दिनको समयमा हुन्छन्। किनकि हामी हामीसँग एक रमणीय र सँधै आवश्यक शैली तान्नेछौं जुन लामो बाहिरी वा सानो कपडाको रूपमा अनौपचारिक जस्तो औपचारिक हुँदैन। त्यसकारण, लामो विजय भएको छैन। तर यो सत्य हो कि पुरानो जहिले पनि विवरणहरू जस्तै pleats हुन्, जुन ध्यानमा राख्नुपर्दछ। विशेष गरी जब यो धेरै नै राम्रो मुद्दा हो यस अवस्थामा। हामीले माथिल्लो लाइनहरूमा देख्ने पोशाकमा, वी-नेक्लाइन हुन्छ र साथै, खुट्टाको भागमा खोलिने।
आमको मनपर्नेहरू बीच कोरल रातो
फेरि, हामी पनि एक लुगाको साथ बाँकी छौं जसमा बाँकी ईर्ष्याको केही छैन। किनभने यस अवस्थामा, pleated स्कर्ट यो पनि यसको महान पात्र हो। हामी देख्दछौं कि उत्सवहरूमा हामी फेडेट्सका धेरै मोडेलहरू कसरी फेला पार्दछौं, किनकि यो अन्तिममा यस मौसममा देखिने फिनिशमध्ये एक हो। यस अवस्थामा यो कोरल रातोसँग जोडिएको छ, जुन सँधै चापलुसी हुन्छ। शीर्षमा पनि चापलुसी क्रसओभर नेकलाइन, ब्लाउज जस्तो सुविधाहरू छन् जसले आरामको भावना दिन्छ। हेराई पूरा गर्नका लागि बेल्ट जस्तो केही छैन।
छोटो र साटन पोशाक सबै भन्दा राम्रो पाहुना हुन
हामी अब यो तथ्यको बारेमा कुरा गर्न जाँदैनौं कि यो पनि मनपर्ने स्कर्ट भएका मोडेलहरूको अर्को हो। निस्सन्देह, यदि हामी एक हेराइ लिन्छौं भने यसले हामीलाई धेरै र रमाईलो पनि प्रदान गर्दछ। किनभने यस अवस्थामा, यो एक हो भेस्टिडो कोर्टो तर यसले घुँडा कभर गर्दछ, त्यसैले यो दिनको विवाहको लागि उत्कृष्ट हुनेछ। अर्कोतर्फ, यो कम्मरमा अलि बढी समायोजित हुन्छ, सँधै सिल्हूटलाई चिन्ह लगाउँदै। केही पातलो पट्टिहरूसँग समाप्त गर्न। दुबै खैरो र sat र यसको साटन फिनिश हेराई पूरा गर्न दुईवटा आधारभूत तत्वहरू हुन्।
लामो छापिएको पोशाक
प्रिन्टहरू पनि यस बर्ष मनाउन चाहन्थे र आमलाई यो थाँहा थियो। यस कारणका लागि, त्यहाँ पोल्का डट्सले भरिएको कपडा जस्तो केहि छैन जुन अर्को सूक्ष्म र नरम समाप्तको साथ संयोजन गर्न सकिन्छ। शब्द साटन पनि अधिकांश मोडेलहरूमा उपस्थित हुनेछ। यस अवस्थामा, मौलिकता एक मा खस्छ लामो पोशाक साधारण कटौतीको, र एक फुलेको आस्तीन जसले अधिक मौलिकतालाई पनि संकेत गर्दछ। तर ती सबै होइन, बेल्टको उपस्थितिले पनि उत्कृष्ट शैली प्रदान गर्दछ।
गुलाबी रंगमा समारोहको लागि जम्पसुट
यदि तपाईं लुगा बाहिर छोड्न चाहानुहुन्छ, तपाईं पनि विकल्प छ जम्पसुट वा जम्पसुट। यो हाम्रो जीवनमा प्रवेश गरेदेखि यो मुख्य विचारहरू मध्ये एक भएको छ। यस कारणले गर्दा, यस अवस्थामा, आमले यसलाई उत्सवको लागि आफ्नो विचारहरूमा समाहित गर्दछ। एक फुसिया जम्पसुट, जसमा फ्लाइट प्यान्ट र एक आरामदायक माथि, रफलहरू र बगिरहेको कपडाको साथ छ। यसमा सिल्हूट फ्रेम गर्नका लागि बेल्ट पनि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » विशेष अवसरहरू » उत्सवहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ? आम पोशाक र जम्पसुट्स पनि
Buckwheat: यो के हो, किन यसलाई अधिक र अधिक सुनिन्छ र किन यसलाई तपाइँको खानामा समावेश गर्दछ
कसरी पहिलो पटक "I love you" भन्न